စွမ်းရည်:300~ 500kg / h
လုံးလေးများထုတ်လုပ်သည့်စက်များကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေး, နှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု. စက်၏ကြာရှည်ခံမှုကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်စက်များကိုသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. သငျသညျ Kingman လုံးလေးများနှင့်အတူလုံးလေးများထုတ်လုပ်တဲ့အခါ, ကျွန်ုပ်တို့၏တောင့်တင်းသောပုံနှိပ်စက်များမှရရှိသောထုတ်လုပ်မှုသည်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်ကိုသင်စိတ်ချပါလိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့၏လုံးလေးများပြုလုပ်သောစက်သည်လည်းလည်ပတ်နိုင်သည် 24/7 တစ်နေ့လျှင်.Eနှင့် ISO နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောလုံးလေးအောင်စက်တွေကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည် 9000 လက်မှတ်များ.
ကုန်ကြမ်းများ၏အစိုဓာတ်သည် ၁၅% အမျိုးသားအဆင့်ထက်နိမ့်သည်။ ကွဲပြားခြားနားပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးတွဲမောင်းနှင်သူကိုမွေးစားသည်။ အစာတောင့်စက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ - အပူချိန်ခြောက်သွေ့ခြင်း, တ ဦး တည်းကျမ်းပိုဒ်အတွက်အအေးနှင့်စိစစ်. ရလဒ်အနေဖြင့်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုတိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတွင်ဘဲအစာတောင့်လုပ်သည့်စက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြောင်းပြသသည်။, တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ပြုလုပ်သောစက်သည်တိရိစ္ဆာန်အစာကဲ့သို့ဘဲအစာကျွေးရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်, ကြက်စာ,ငါးအစာကျွေးခြင်းနှင့်အစ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးဇီဝသက်ရှိသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိဇီဝသက်ရှိဘက်တီးရီးယားများရှင်သန်နှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်။ >90%.
Pellet ပြုလုပ်ခြင်းသည်လက်ရှိဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်သည့်ကမ္ဘာတွင်အစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကျောက်မီးသွေးနှင့်ရေနံစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကွယ်နှင့်လောင်စာဆီလိုအပ်ချက်တို့ကြောင့်သိုလှောင်မှုနှစ်ခုနောက်ကျနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်, အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဇီဝလောင်စာလုံးလေးများမြန်ဆန်စွာဖွံ့ဖြိုးနေကြသည်. ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းအသုံးချမှု၏ကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်, လုံးလေးများကိုကုန်ကျစရိတ် နည်း၍ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်သည်.
Pellet Making Machine မှမည်သည့်ပစ္စည်းများအား Pelletized ပြုလုပ်နိုင်သည်?
သစ်တောနှင့်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြင့်လုံးလေးများထဲသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်, ကဲ့သို့: သစ်သားထည်, shaving, Sawdust, မြေပဲခွံ, ကြံကြံဇီဝဓာတ်ငွေ့, Caster Shells / အညှာ, ကော်ဖီခွံ, စပါးကျင်း, နေကြာညှာ, လဲမှို့, ဆေးရွက်ကြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း, မုန်ညင်းစေ့, ရေဆိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း, ဝါးဖုန်, လက်ဖက်ရည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း, ဂျုံမှုန့်, Palm သတိရပါ, ပဲပုပ်ကိုသတိရပါ, Coir အသံ Barks / Straw, စပါးခွံများစသည်တို့ဖြစ်သည်. နောက်ဆုံးအတောင့်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဘွိုင်လာများနှင့်ကြီးမားသောဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအပြင်အိမ်အပူသို့မဟုတ်ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်
★တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အစိုင်အခဲအမျိုးမျိုးကိုကြက်သားကဲ့သို့ကြက်၊, ဘဲ, ကိုရီးယား, ငါးများအပါအဝင်ငုံးများနှင့်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ, နွားမ, ယုန်, ဝက်, စသည်တို့.
★ကုန်ကြမ်းများရရှိရန်လွယ်ကူသည်, ပြောင်းဖူးလို, ပြောင်း, ဂျုံဖွဲ, ဆန်, ပဲ, စသည်တို့.
★လျှပ်စစ်ကြက်ဘဲအစာတောင့်လုပ်စက်သည်လူကြိုက်များသည်, မွေးမြူရေးခြံ, နှင့်ကြက်ခြံ.